सुतेको समयमा स्वास नफेर्न यी बालिका
मानिसले चाहे जतिसुकै महत्वपूर्ण कामहरु गर्न किन नभुलोस् तर स्वास फेर्न भने नमरुन्जेल बिर्सिँदैन । तर यो दुनियामा एकजना यस्ती बालिका छिन् जसले साँच्चिकी स्वास फेर्न पनि भुल्छिन् । बेलायतको डेरहाममा बस्ने माइकल र काइली राम दम्पतिकी छोरी फ्यालिसिटी राम नामकी ती बालिकाले राति सुतिसकेपछि बेला बेलामा
ट्रम्पले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्ने बाँदरको भविष्यवाणी
फुटबल प्रतियोगिता, मौसम तथा वर्षात् तथा चिट्ठाका विषयमा विभिन्न जिवजन्तुहरुले भविष्यवाणी गर्ने गरेको त सुनिएको थियो । तर यो पटक भने एउटा बाँदरले दुनियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिका बारेमा नै भविष्यवाणी गरिदिएको छ ।
बाँदरको उक्त भविष्यवाणीको विषयमा मानिसहरु सोसल मिडियामा बहस
यस्तो देश जहाँ एउटीमात्र विवाह गरे जन्मकैद !
तर, विश्वमा एउटा यस्तो राष्ट्र पनि रहेको छ जहाँ एउटा विवाहमा मात्र सिमित रहेमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ । दोस्रो
थरीथरीका आमाः कोही ५ वर्षमा गर्भवती, कसैका ६९ सन्तान
आमा बन्नु सजिलो कर्म होइन । संसारमा धेरै आमाहरु अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुज्रिएर सन्तानलाई जन्म दिन्छन् र हुर्काउछन् । यहाँ भने त्यस्ता आमाहरुबारे चर्चा गरिएको छ जसले अपत्यारीलो परिस्थितिका बीच सन्तानलाई जन्म दिए र संसारभर चर्चित बने ।
पाँच वर्षमै आमा
छोरी जन्माउने बुहारीलाई सासुले दिइन् महँगा कार
छोरा र छोरीबीच विभेद गरिने परम्परागत समाजमा छोरी जन्माउँदा महिलाहरुले विभिन्न खाले हिंसा र अपमान भोग्नुपरेका घटना नौलो होइनन् ।
अझ छिमेकी भारतमा त छोरी जन्माएकै कारण महिलाहरुले ज्यानै सम्म गुमाउनु परेका समाचार आइरहन्छन् । तर विभेद र हिंसाको उक्त दुस्चक्रलाई चिर्ने एउटा सुखद घटना भएको छ भारतको
अनौठो मन्दिर, जहाँ हुन्छ स्तनको पूजा
विश्वमा अनेक प्रकारका मन्दिरहरु छन् । नेपालमा पनि विभिन्न थरीका मन्दिर तथा शक्तिपिठहरु रहेका छन् । कोही पहाडमा छन् त कोही नदिको बीचमा समेत ।
शक्तिपिठहरुमा देवी देवताका विभिन्न विशेष अंगहरुको समेत पूजा हुन्छ । जापानमा एउटा यस्तो मन्दिर छ
९ कक्षाको परीक्षामा सोधियो अनौठो प्रश्नः विराट कोहोलीकी प्रेमिका को हुन् ?
भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहोली र अभिनेत्री अनुष्का शर्माको प्रेम सम्बन्ध सधै चर्चामा रहने गर्दछ । कहिले उनीहरुको ब्रेकअपको कुरा आउँछ त कहिले प्याचअप को । हुँदा हुँदा यी दुइ स्टारको प्रेम सम्बन्ध अब भारतका स्कुलहरुमा विद्यार्थीलाई सोधिने सामान्यज्ञानको प्रश्न बन्न थालेको छ ।
हो, भारतको एक
यी युवतीले दिनहुँ दाह्री खौरिन्छिन् !
प्रायः पुरुषहरुले आफ्नो अनुहार सफाचट बनाउनका लागि नियमित रुपमा दाह्री खौरिन्छन् ।
तर के तपाइँले कुनै महिलाले नियमित रुपमा दाह्री खौरिएको देख्नुभएको छ ? यो कुनै हँसिमजाक होइन । एकजना युवतीले नियमित रुपमा आफ्नो दाह्री खौरिने गरेकी छिन् । दाह्री नखौरिएसम्म उनी घर बाहिर निस्किँदैनिन् ।
मान्छेको सोख यस्तो पनि ! (भिडियोसहित)
मान्छेको शोख पनि अनेक थरिको हुन्छ । सामान्य टाटु त प्राय आजभोली सबै जसोले नै खोपेका हुन्छन् ।
गर गहना लगाएर आकर्षक हुनका लागि शरीरका केहि भागहरु पनि प्रायले खोपेका हुन्छन् तर यहाँ शरीरलार्इ र अनुहारलाइनै पुरै मोडिफाई गरिएको छ ।
अचम्म मान्नु पर्दैन यो वास्तविक जिबनमा गरिएको मानब निर्मित
हुलाकमार्फत् दाल बेच्दै सरकार
हुलाकको आधारभुत काम भनेकै चिठीपत्र आदानप्रदान गर्नु हो । तर आधुनिक दुनियाको हुलाकको काम यत्तिमा मात्र कहाँ सिमित हुँदोरहेछ र ? भारतमा अब हुलाकमार्फत सरकारले जनतालाई दाल बेच्ने भएको छ ।
राज्यहरुमा सरकारी पसलहरु नभएका कारण जनताले सुलभ मूल्यमा दाल नपाएको भन्दै सरकारले देशभरका हुलाक कार्यालय